Padmaavat – Filimside.net
Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa soo daabacday maqaal ay ku xaqiijisay in Padmaavat uu yahay Blockbuster-ka ee ugu weyn la daawado bisha Janaayo madaama filimkaan uu ganacsi ahaan keenay 284 Crore (Trade Figure). Laga soo bilaabo […]
Padmaavat weli tiyaatarada kama dagan todobaadkiisa 9-aad ayuu ganacsi sameenayaa!
Filimka weyn Padmaavat ee hogaamiyaha ka yihiin Deepika Padukone, Ranveer Singh iyo Shahid Kapoor ayaa weli ganacsi sameenayo asigoo todobaadkiisa 9-aad guda galay waana arin naadir ah oo uu filim Blockbuster ah sidaan tiyaatarada ugu daaho. […]
Deepika Padukone Waxyaabihii Ay Padmaavat Ku Dhex Jileysay Sheey Kamid Ah Ayee Bhansali Ka Codsatay Wuuna Siiyay Balse Maxay Yihiin?
Deepika Padukone hader waxaa loogu yeera Padmavati of Bollywood ama Rani of Bollywood oo micnaheeda ah boqorada Bollywoodka kadib markee sameysay doorka weyn ee Padmaavat. Deepika filmkaan waxuu u noqday mid qaas ah maadama doorkeda […]
Box Office Update: filimada Padmaavat iyo Hate Story 4 ganacsigooda halka uu maraayo
Filimka Hate Story 4 ayaa hoos u dhac weyn sameeyay todobaadkiisa labaad waxaana muuqato inuu keeni doono 2 Crore ilaa 2.25 Crore todobaadkiisa labaad wuxuuna hoos u dhacay 80% ganacsigiisii todobaadka kowaad. Sida muuqato filimka Hate Story 4 cimri […]
Padmaavat Business Update: filimka Padmaavat ganacsigiisa halka uu maraayo mudo 7-isbuuc kadib
March 18, 2018 Zakarie Abdi
Inaba caadi ma ahan filimka Padmaavat ayaa 2.32 Crore (Trade Figure) keenay todobaadkiisa 7-aad taasi oo ganacsigiisa filimkaan ka dhigtay 282 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. Waxaa cajiib ah in filimka Padmaavat uu gobolka CI ka keenay 7 […]
Padmaavat kaliya Baahubali ayaa ka ganacsi wacaan todobaadka 7-aad shanta ee ugu dambeesay!
Waxaan horey idin kula wadaagnay in filimka Padmaavat uu ka mid noqday 10-ka filim ee isbuuca lixaad ganacsiga ugu wacan sameeyeen taariikh ahaan. Balse Deepika, Shahid iyo Ranveer filimkooda Padmaavat intaas kuma hakanaayo madaama uu hadda todobaadkiisa […]